डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ३०० किलो तौलको विश्वकै ठूलो ताला किन बनाइयो ? – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०६, २०७७ समय: ४:१४:०२
एउटा तालाको तौल ३ सय किलो र यसलाई बनाउने खर्च डेढ लाख रुपैयाँ । धति धेरै मेहनत र पैसा खर्च गरेर यो विशाल ताला किन बनाइयो होला ? करिब ७० प्रतिशत
काम सकिएको यो तालाको बारेमा सुन्नेहरु छक्क पर्छन् । भारतको अलीगढको ज्वालापुरीमा यो ताला बनेर तयार भइसकेको भए पनि यसलाई अझै सुन्दर लुक
दिनको लागि केही परिवर्तन गरिँदैछ । परिवर्तनपछि यसको तौल ३५० किलोसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो ताला विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ताला हुने दावी
गरिएको छ । अलीगढका ताला कालीगढ सत्यप्रकाश शर्मा र उनकी पत्नी रुक्मणी शर्माले मिलेर यो विशाल ताला तयार गरेका हुन् । यसलाई बनाउन सत्यप्रकाशका
साला शिवराज शर्मा र उनका छोराछोरीले पनि सहयोग गरेका छन् । शहरको रामसन्स लक्सका राजीव कुमारको अर्डरमा यो विशाल ताला तयार गरिएको हो । ६ फिट २
इन्च लामो र २ फिट साढे ९ इन्च फराकिलो यो ताला बनाउन ६५ किलोभन्दा धेरै पितल प्रयोग गरिएको छ । सत्यप्रकाशका अनुसार ताला बनेर तयार भइसकेको छ
तर यसलाई अझै राम्रो आकार दिन यसका कडा बदल्ने निर्णय गरिएको छ । कडा बदलेपछि यसको तौल ३५० किलो पुग्नेछ । रामसन्स लक्सका राजीव कुमारका अनुसार ७०
प्रतिशत काम भइसकेको छ । तालानगरी भनिने अलीगढका मानिसहरुले यसलाई देखेर गर्व महसुस गर्नेछन् । ताला तयार भएपछि यसलाई भव्य रुपले सार्वजनिक गरिने
उनले बताए । यो विशाल ताला बनाउन रुक्मणी, सत्यप्रकाश र शिवराज लकडाउनको समयदेखि नै जुटेका हुन् । यसको अर्डर लकडाउन भन्दा पहिले नै
दिइएको थियो । सत्यप्रकाशका अनुसार अहिले ६ लिभरको ताला तयार भएको छ । यो ताला खोल्ने साँचो ३ फिट ४ इन्ट लामो छ र साँचौको मात्रै तौल २५
किलोभन्दा बढी छ । सत्यप्रकाशका पिता भोजराज शर्मा पनि प्रसिद्ध ताला कालिगढ थिए । उनले ४० किलोभन्दा अधिक तौलका ताला बनाएका थिए ।
Last Updated on: March 19th, 2021 at 4:14 am